Home » प्रदर्शित लेख
09.05.2020 Category: प्रदर्शित लेख
Maka onye arụ ahụ, a na-ejikịkar na email na ndị isi dị mkpa dịka Google ma ụ bọ Yahoo ebe ọ bụ nefefu na ọ frr nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị ihe he bla gọ gọ.
Otú ị dị, ụlọ ah naa na-enwekarhe ihe dị iche iche a chọr a, ọ bụkwa ihe dị mma ọchọrọ ilebanyya anya na ozi ịntanetị ईमेल.
Ọ b n ezie na e nwere nsịgharụ nsịgharị dị na ụtụtọ ụlọ ọrụ ntanetị, ọtụtụ ụlz ọrụ na-erite uru na mgbanwe na ike nke ọrụ ईमेल। Email na-emekarị ka ozi-e na-elek siteta साइट na ihe nkesa na-ezigara ma ig bụ raara onwe ya nye.
Chta ozi nchọta kacha mma
Interserver – $ 5.00 / मो
– $ 0.99 / मो
– malite na $ 0.80 / मो
– malite na $ 3.99 / मो
– malite na $ 2.95 / मो
– malite na $ 2.96 / मो
Ntuzi nkuzi साइट na nkwịsuz
Ngosipụta: WHSR natara ọgwt ntughar na साइट ना ụlụ ụrọ ọlọ ọrụ ईमेल ndị a kpọtụrụ aha na nibe। एकिच न न्केनये किसीị डबेरे न इजीबो आहịम naहे ụrị ना अह आह.
तुपु म अबनी नी’बे एबे ए का एụ टली इली इहे एनडीị एमबी ab.
1 केडु edrụ ईमेल Bochum
1.1 Gnọọ mere-ga-eji ch Email ईमेल ईमेल?
1.1.1 1- 1-कचमरा
1.1.2 2- नाचे डेटा
1.1.3 3- नेकवाडो
1.2 Gn Email ना-एमे ईजीबो ईमेल बोचुम?
2 ईबे का haghachite Akaụntụ Akaụntị GỊ?
2.1 1- बुंडल्ड (ईमेल + वेबụ) बोचुम
2.2 3- एंटरप्राइज सॉल्यूशंस (सास)
केडु edrụ ईमेल Bochum
Ọ bụ ezie na ụ bỌghi isiokwu na njedebe nke ọnụ ụgụgụ ire ztọ nke ire ụtọ, isi ihe n nịkọta azụmahịa nke azụmahịa abụghịzzz mgzbagzzz i izbze ईमेल Bochum b Bo n’ezie okwu na-enweghụ atị na nanị na-egosi ihe irhe na-akwado ozi ịntanetị gị। Dka wmụmaatụ, Gmail nwere ike weere da ka ozi-e.
ओटु ụ dú, n’ime akụkke nke isiokwu a, anyị ga-eche na e na-achọ na ịlele ozi anntanetị gị। Nke a pwetara na-ga-enwe njikwa zuru oke na ozi ịntanet site gan, साइट ना ụmepụta adreesị na ịmepụta otu esi ajikwa ha gaa ebe ha na na-echekwa.
Mgbe ezitere gị ozi email w nwere nkịwa d e iche iche gịnyere adresụ ईमेल gị। डाबरे न एड्रेस आहụ, एक ना-ईजीगा लेटा आह e ना ईबे नचेक्वा एडोज़िरी का k गा। Ozugbo ug ruru ebe ahụ nwere ike imeghe ma gụọ ya n’oge og bela ọ chọrọ.
Ọ bụrỌ na ụ zụrw ngwugwu ụ b wela weebụ, ụ na-abọkar-ka ọrụ ntanetị ईमेल dị n’ime ngwugwu weebụ gị। Ọ bịrỌ na wenweghbe mgbe ahị ọ ga-achụ ịchọ nch nkịta nchịkọta ईमेल iji jiri ngalaba omenala maka email gị.
एड्रिसो ओज़ी-ए ओमेनला गा – इले ओना डीị का नाके ए:
Gnọọ mere-ga-eji ch Email ईमेल ईमेल?
Mgbe m na-eji okwu azịmah aa azịmahịa ezite ihe m na-ekwu n’ezie na-eji omenala ngalaba maka ozi ịntanetị gị। Enwere wtụtụ ihe mere e ga – eji mee nke a site n’aka arakachamara na nchekwa data। Ụd e azụmahịa, ego a naghk akwụ ụgwọ, uru a na-akwụ karịrị nnọọ ụgwọ ndị ahụ.
Iji a omenala ngalaba ga-ekwe ka gị ah ma mara kpọmkwem onye ha na-emeso। N’ihi na ngalaba a na-achwakwa ma na-achwakwa gị, on Ga-esiri onye n bụla ike ịkọwa onwe ya dị ka ụlọ ọrụ gị.
Ka any tụụlee ihe abụọ ịhbe ebe otu ọlọ ọrụ na-eji ozi jintanetị azụ ahịa mgbe onye nke ọzọ jiri-ọrụ ईमेल n’efu;
Ụl na Ụrụ A – [ईमेल ना-एचेबे]
Ụl na Ụrụ B – [ईमेल ना-एचेबे]
N’hehe banyere Ụlọ ụr, A, onye ụ bhela nwere ike hadenye aha maka adreesị ozi-e ụ bụrụhaala na a ka dị.
Ụlọ Ụrụ B Ụlọ ụr ga ईमेल जीए-एडhe आइशे नीị, ओये न्वे ọlọ। अहा halha ọrụ B nke ọlọ ụr na B na-egosipọtakwa ụrwa ọkachamara na nraranye nye azụmahịy ya nke ụrọ ahọ nwereere.
2- नाचे डेटा
साइट ना ịch nata ozi ịntanetke nke gị, ị na-enwe njikwa zuru oke maka otu esi eziga ozi gzi na ezigara gị। Dka ịmụmaatụ, ụ bụrị na ọ n a na azụmah ea ebe e nwere ụfọdụ ụkpụrụ dị ka data localization, ị nwere ike ịchekwa ozi ịntanetị gị na sava na ebe nabe.
निदो आहị ता ना-एकुवसी ओकुवु ीक साइट ना ईमेल। O yikarọrị ka ụfụd’ n’ime ozi ịntanetị ga-agịnye ozi dụ mkpa dịka ịgba ụgwọ, ịnye akụkwọ, nkwekọrịta na ihe ndị yiri ya। साइट n’iji ozi nchọta nke onwe gi, en ga-enwe ike ịkwado ụnadodụ ndị ga – esi na nsogbu ईमेल.
Ozi ईमेल मा ụ bụ nke mebiri emebi nwere ike imetụta azịmahịa gị na nkwado nke na-abịa na ụlọ ahịa ईमेल azụmahịa nwere ike ịba uru.
Gn Email ना-एमे ईजीबो ईमेल बोचुम?
ỌtàtỌ n’ime àgwà ndz ezigbo ọlọ ererụ weeb k nwere kwesịkwara ịnọ na ezigbo nnabata ईमेल। N’ime àgwà ndị a, elu nke ndepịta g à kwesịrab nadabere na mgbanwe। Ihe nd: ọzọ gụnyere:
Dịka azịmahịa, ndị ahịa gw kwes arị inwe okwukwe na iguzosi ike n’ezi ihe nke azụmahịa gị। हा न-एनफेफ़ जी ओज़ी नूज़ो, डॉका अहा, एड्रिस्सो ओज़ी-ए ना इकेकेवे ụbụna डेटा nchịkọta अहंकार। Ịdebe email gị dị mkpa, ele ga-elepa anya maka njirimara nd n d nka nchekwa data, mgbochi malware, mgbochi spam na ihe ndk dị ka onye na-akpọ ईमेल.
Anyoc na-enyocha ईमेल anyị साइट na nyiwe dhe iche iche na ere nwere ike fedike mfe ichefu na nke y bụla n’ime ha nwere ike ịchọ nhazi dị iche iche। Mgbe g na-achọ onye na-eweta nnabata ईमेल, hụ na ị nwere ohere onweta वेबमेल, POP na IMAP.
वेबमेल ना-एनी जीị ओइरे इजी ओने-एवेता ओजी-वेबụ नके ना-एडबा नाबा। IMAP na-enye gị ohere ụgzi ozi ईमेल g na साइट ना ngwaọrụ ‘benla n’enweghị ibudata हा। POP n’aka nke ọzọ ch’ra ka ibudata ozi anntanetup gị tupu ke gụọ ha.
Inwe adreesụ IP gị ब्लैक लिस्टेड bụ ọzoro doro anya-ga-ahụ ụrụ azọmahịa gị (karịsịa ndị ahịa!) Giuo ya ngwa ngwa। Nke a nwere ike ịb a nsogbu dk mkpa d nka otu IP gọ na-achịp -ta na ere na-ewe oge na mgbalị iji mee ka dere ọcha ọzọ। Zere ndị ọrụ ozi email ndw nwere aha makma maka inweta nd na ah na na ndị na-eto eto ka-ga-ejedebe na IPkeke a na-emegharị ma na-adị na blacklist.
Ị nwere ike lelele wakwa nchọk ota ozi nke ụlụ jrọ ईमेल jiri Mboxbox MX.
ईबे का haghachite Akaụntụ Akaụntị GỊ?
1- बुंडल्ड (ईमेल + वेबụ) बोचुम
बंडल किए गए ईमेल होस्टिंग bbe mgbe email nwetara ntanet na ईमेल na-abịa yana (ya mere okwu ahụ bụ ‘bundled’) akaụntụ weebụ weebụ gị। Dabere na mkpa gị, nke a nwere ike ịba uru dị ukwuu ebe e bbe na ị gaghị mkpa ijikwa ozi ịntanetị na akaụntụ dị iche ma ọ bw kwụọ ụgwọ maka nchịk ईमेल.
ओटू ị dú, एक ना-एजिकरị ịchịta ọchọta ई-मेल eme ihe na ohere साइट ना mkpokọta ikike nke akaụntụ ntanitị weebụ gị। ओटतु नेकुनुये न-एकेने ओटू नेके ना-एकेटा एन’एटिटी ईमेल गी ना एनटेनटाकोटा। ई वेज़गा ना ओएर, ụ ना-एतेकवावा एगो एनके बैंडविट इकेने ना एụकंटो जीụ.
ọghọm – नजीरमारा न नीचक्वा। Ị bughỌ maka nnukwu ọlọ ụrị.
uru – Mfe iji setup, njirimara atụmat n, nnabata ụtụtụ obere aka nant a ईमेल ना otu ,nụahịa.
Ọr k nchọta ozi-e kacha mma? Ọ bọghỌ ụlọ Ọrt ntanet weime weebụ na-enye ataramatwe raara onwe ha nye maka ozi-e, ma dịka ọmụmaatụ, enwere ike ọchọta ihe atụ zuru oke nke ezigbo rarịrrr।.
3- एंटरप्राइज सॉल्यूशंस (सास)
Enwere ndw na-enye ererị d Googleka Google na Microsoft nd n nwere nchịkwa nchịkọta ईमेल dị ka G Suite na Microsoft 365 Business। Nd a bwe ọrụ ईमेल raara onwe ha nye bị ndị dị mfe iji ma dama ike kama ọ dị mkpa ka ejikwa ha rụọ ụrụ iche site na Bochum ọbụlagodi na ha nwere ike iha’s nhabaaba.
Ihe dọ na nke a bụ na ụrụ ahw nwere ike ịkwụsọ ọgwị dị oke ọnụ ka ụda nrụ gị na-abbanye। Dka ụmụmaatụ, G Suite nwere ike ọnweta $ 5.40 naanụ maka atọmata atụmatụ, मन नीके आहụ bụ ụgwọ ịkwụ yegwọ onye ọ bụla kwa ọnwa.
ọghọm – Lerọ nlekọta ọzle। अहं – अहं ọzọ iji nweta akaụnt। ईमेल.
InterServer dabere na New Jersey ma nọrbe ebe a ruo iri afọ abụọ ugbu a – ab d – ogologo oge maka onye ntanetị weebụ। Akpa webata dpa ka onye na-ere ah naa na akaụntata Bochum nke ama ugbu a na-ekpuchi ihe niile nke वेब होस्टिंग सेवा स्पेक्ट्रम.
Ọr Hosting: बंडल किए गए ना समर्पित ईमेल होस्टिंग.
Ọbịnadị n’etiti ndn nnabata web na-akwụ ụgw e mmefu ego, NameCheap na-abịa dị ka ọnụ ala (enweghị pun zubere)। साइट ना atịmat na Bochum na-eker nta nke na-amalite dị ka $ 1.44, 44b ,lagodi maka mmelite ọhụrụ हा na-noa isi ụfọdụ ọnụahịa kachasị ala na ụlọ ụrụụ। ई वेज़ुगा बोचुम, अहाएप न-एन्येक्वा एनक्वाहा ịọ n ịz n dọka नगालबा अहा न ọrụ nchekwa.
Wez Wega atụmatụ ọnụah Sta Starter ha dọ ụnụ ala, Namecheap nwere nrụ dị iche iche gụnyere ndị ọbịa ईमेल ke onwe। साइट ntak /rị dị ka $ 0.99 / mo nwere ike nweta ọ bịghị naanụ nnabata ईमेल kamakwa ụfọdụ ohere maka nchekk faịlụ। Ọnu आहỌ ना-अरị अलु दबेरे ना ụtụtụ igbe akwọkwụ ozi ọchọrị.
Hostinger dabeere na Kaunas, लिथुआनिया ma na-enye ụtụtụ atụmatzi nhazi। इहे कचा एमएमए गबसार वेब होस्टिंग हा bọ na ị na-ab naa ना बंडल ईमेल होस्टिंग याना। N’bbanyeghị ma ag bụrị na e debanye aha maka ha na-akwado Bochum atụmatụ ma ụ bụ ọbụna VPS Bochum, hawetara gị email-echebe kpuchie.
Dabere na ma लॉस एंजिल्स कैलिफ़ोर्निया, InMotion Bochum aburwo gburugburu maka ihe karọrỤ afị 15।.
Bundr Bund: बंडल ईमेल होस्टिंग.
साइट ना ndek na ọrụ af n iri n’okpuru eriri ya, TMDhosting ab mmwo onye mmek on ntụkwasị obi maka ọtụtụ ndị nbe ebe nrụọrụ weebụ kemgbe ọtụtụ afọ। ओ nwere otutu ebe data gbakaratara na US gbakwunyere na नीदरलैंड। साइट ना nan naahịa malitere साइट ना ala da ka $ 2.95 kwa ọnwa, nhwar n a bụ n’ezie oke maka nnukwu ma ụ bụụụ na ị na-atụle ha na-ejikọ ozi email na atụmatụ Bochum hachum.
Anyụ na-atịle A2 Bochum da ka otu nụime ọlọ ịrụ weebị kachasụ elu na ya nwere mgbasa ozi ọma nke ebe nche nche nche nche nche nche nche né nche né nche né nche né nche né nche né nche né nche né nche né nche né nche né nche né nche né nche né nche né nche né nche né nche né nche né nche né nche né nche né nche né nche né nche né nche né nche né nécheewa data gburugburu ụwa – na Amsterdam, Singapore, Arizona na, n’ezie, मिशिगन। Ọ ना-एन्ये हमरो इहे दो w ओकेवु मा जिकता य न न्नुकुव आहुमụ आहụ ना ना ụnị आह e एगो बारा ओरु.
इह नदि बड़ उरु
Anyaw ebipụtawokwa ọtụtt ntuziaka na-arụ ịrị maka ndụ na-achọ onye ọbịa.
Ndep Ndta zuru ezu nke nd-na-enye ụrị nchịkọta anyha nyochaa
नडुज़ी: ओले ओगे आईजी गबनवे ग वीपीएस
निनोचा: एगो ओले का a गा-अकवॉ मेका ntanetị weebụ
Kachasị एमएमए वेब होस्टिंग चुनता है
Ọr ob kachasị mma maka obere ọlọ ụrac
Maka onye ọrụ ahụ، na-ejikọkarị ایمیل na ndị isi dị mkpa dịka Google ma